Noob Nduzi na Ahịa Online | Martech Zone
Noob Nduzi na Ahia Ntaneti
Tọzdee, Septemba 29, 2011 Tọzdee, Ọktoba 27, 2011 Douglas Karr
Ọ bụ ezie na infographic a na-ekwu na ọ bụ a noob ndu, ọ bụ n’ezie anya nke ọma atumatu aka na-emepe ihe inbound ahịa atụmatụ online. Ọwa ndị akọwapụtara gụnyere ahịa email, ọgbọ ndu, nyocha okike, ọchụchọ akwụ ụgwọ, mgbasa ozi mmekọrịta, njikarịcha na nchịkọta. Ihe omuma ihe omuma bu ihe di nma - ya na ihe nlere di nma maka onye na ere ahia na ntaneti.
Naanị ịbanye na infographic bụ atụmatụ mmekọrịta ọha na eze. Igodo nke nkwalite mmụta ọsọsọ Nna-ukwu kacha elu Ching Hai ndị ọgbọ gị ghọtara. Relationslọ ọrụ mmekọrịta ọha na eze dị ka nke anyị, Dittoe PR ihe, bụ nna ukwu na ịnweta ohere site na iji mbipụta na omume ndị bụ isi.
Unbounce - N'onwe Gị ọdịda Page Platform
Ihe omuma ihe meputara site na Unbounce. Unbounce bụ ọrụ enyere onwe gị aka nke na-enye ndị ahịa na-eme ọchụchọ akwụ ụgwọ, mgbasa ozi ọkọlọtọ, email ma ọ bụ mgbasa ozi mgbasa ozi mmekọrịta, ụzọ kachasị mfe iji mepụta, bipụta & nnwale nkwalite peeji nke ọdịda na-enweghị mkpa IT ma ọ bụ ndị mmepe.
D & B360 na - eme ka CRM dị ike karịa
Ọkt 1, 2011 na 10:34 AM
Otu n'ime ndị kasị mma inforgraphic m hụrụ na-adịbeghị anya. Ihe omuma di omimi nke edere na otu infographic, ihe ndi ozo mere.
Ọkt 1, 2011 na 10:48 AM
Echere m otu ihe ahụ, Robert! Ọ bụ ezie na ọ dị m ka ọ bụrụ na e nwere ụzọ iji mee ka ọ nwee ike ịgụ ya karịa na obere.
Ọkt 2, 2011 na 7:37 AM
Ọmarịcha eserese! Achọrọ m ije ọ bụla ahịa site na nzọụkwụ! Zọ sitere n'ike mmụọ nsọ iji lee ihe niile dị mkpa iji kpoo ịmalite mmekọrịta mmadụ na ibe ya.